Khabiirka Cabbirka: Qodobbada Macnaha ereyada ee bilaashka ah ee WordPress - Talo-siinta Khibradda
Haddii boggaaga WordPress uu leeyahay waxyaabo badan oo aad ka daalan tahay qeexitaano iyo shuruudo soo noqnoqonaya, markaa waa inaad ku dhejisaa erey-bixiyaha ereyga sida ugu dhakhsaha badan. Faahfaahin erey-bixineed ayaa kaa caawineysa inaad ka fogaato mawduucyada kala-soocista oo aad ku hayso sharaxaadahaaga iyo shuruudaha biloow bilood bilaha. Kalandarka WordPress-kani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad shuruudaha qoraallada ku xirto sharaxaadaha erey-bixinta iyo waqtiga badbaadinta - bonus casino usa. Tusaalooyinka glossary waxay ku siinayaan fursad aad ku muujiso shuruudaha ku habboon bogagga shabakada isla markaana booqdayaashana hal bog ka dhigaya, oo hoos u dhigaya xaddigaaga xaraashka ilaa xad.
Halkan Alexander Peresunko, oo ah takhasus sare oo ka socda Semalt , ayaa ka hadlay sida loogu talagalay ereyada ugu fiican ee ugu muhiimsan ee loogu talagalay boggaga WordPress.
1. Qaamuuska Qaamuuska
Waa mid ka mid ah ereyada ugu caansan ee loogu talagalay dadka isticmaala WordPress. Haddii aad raadineysid inaad bixiso erayo wanaagsan iyo shuruudaha booqdayaashaada, waa inaad ku rakibtaa fiiladaas isla markaana u hesho dhaqdhaqaaqa sida ugu dhakhsaha badan. Waxaad ka heli kartaa plugin ka ah diiwaanka Plugins ee WordPress aadna bedeli karto goobahaaga sida blogkaaga.
2. Click2Refer Wicitaanka Waalidka
Haddii aad rabto in aad udheesho akhristayaashaada shuruudaha kala duwan iyo bogagga internetka, markaa Click2Refer Virtual Dictionary waa erayga ereyada saxda ah ee adiga kugu habboon. Waxay leedahay sifooyin kala duwan oo gaar ah waxaana lagu dhejin karaa bog kasta oo WordPress ah ama blog. Waxay kaa caawin doontaa inaad martida ku dhex marto goobtaada sida mawduucyadaada si wanaagsan loo dhisay oo aad u fiican..
3. Labo Luqad Turjumaad ah
Manhajka ereyadani waa mid sahlan oo lagu rakibo oo bilaash ah. Haddii uu si sax ah u shaqeeyo habka magaca, soo jeedinayaan. Marka aad rakibtay oo aad kicisay erey-bixintan erayga ah boggaaga WordPress, waxaad si sahlan u eegi kartaa tayada mawduucaaga ama maqaarkaaga iyo inaad hagaajiso ereyada internetka. Waxaad u baahan tahay inaad liis gareysiiso liistada buug-yaraha bogga internetka oo aad bilowdo inaad soo jiidato dad aad u badan oo ku yaal goobtaada, kordhinta iibkaaga iyo inaad lacag badan hesho
4. Ansixinta 'Pro'
Isticmaalkani wuxuu abuuraa interfiyuuga isticmaalka-fudud ee loogu talagalay marin-u-sameynta maadooyinka alifbeetada iyo mawduucyada boostada. Qalabkan ereyada ah ee cajiibka ahi waa bilaash waana la isticmaali karaa labada shabakadaha WordPress iyo blogger labadaba. Waxay leedahay liis dheer oo ereyada Ingiriisiga ah, shuruudaha, gaabinta iyo isku midka ah si loo doorto. Nidaamka bilaashka ah wuxuu leeyahay xaddidan fursado xadidan, laakiin qaybteeda la bixiyay waxay furi doontaa waxyaabo badan oo laguu soo bandhigayo iyo dalabaad
5. Eray bixinta WP
Waa mid ka mid ah ereyada ugu caansan uguna wanaagsan ee loogu talagalay dadka isticmaala WordPress. Tan waxaa loogu talagalay qaamuuska iyo buug-gacmeedka erey-bixiyeyaasha waxayna fududahay in la rakibo. Fidinta ayaa kaa caawineysa inaad sii wado dareenka iyo diiradda akhristayaashaada ku haya adeegyadeeda bilaashka ah iyo qaabka aad u fiican
Waa erey kale oo cajiib ah oo faa'iido leh oo faa'iido leh iyo ereyga faahfaahinta adiga kugu habboon. Lexicographer wuxuu u ogolaanayaa dadka isticmaala inay isku dubaridaan boggooda internetka waxayna ku darsadaan ereyada dhammaan boggaga internetka ee wax ku saabsan daqiiqado. Uma baahnid inaad wax ka qabato koodhkaaga HTML maaddaama plugin uu shaqooyin aad u badan u leeyahay marka aad si buuxda u rakibto. Inkastoo aan wakhti la cusbooneysiinin, fiilada weli wali waa ay fiican tahay in la raaco.